Ibali likaGeorge Floyd: Ngubani uGeorge Floyd?
PI-olice Brutality sisihloko esaziwa ngabantu abaninzi base-Afrika-baseMelika. Oko kubizwa ngokuba 'yintetho' kunikezelwa nangaphambi kokuba abafana abantsundu babe badala ngokwaneleyo ukuba babone ubuhlanga.
Umntwana omnyama uyakhunjuzwa ukuba ahlonele amapolisa kwaye alandele yonke imiyalelo ukwenzela ukuba bangaphili bafe. UGeorge Floyd inokuba wayengumntwana onjalo.
Isizathu sokufa kukaGeorge Floyd
Xa wayethatha umphefumlo wakhe wokugqibela epeyinta ubuso kwaye mhlawumbi esoyika ikhonkrithi ngamapolisa (UDerek Chauvin) yaguqa edolweni apho, le ndoda ineminyaka engama-46 yayingumntwana kwakhona. Kabini wakhwaza esithi "mama, mama!" Wayengakwazi ukuphefumla. Usweleke kungekapheli nemizuzu.
Omnye umntu omnyama wabulawa ngamapolisa amhlophe.
Kutheni wabanjwa uGeorge Floyd?
Iphepha lokuqala lakhutshwa emva kokubhubha kwakhe, lidutyulwe ngumboniseli wolwaphulo-mthetho, libalisa ngemizuzu yokugqibela yobomi bale ndoda. Ukuphathwa kwakhe ngenkani kwathiwa kukubanjwa kwetyala lokutyhola kunye nokuchasa kwakhe ukubanjwa. Unokuva ababukeli becela ubomi bukaGeorge Floyd njengoko ebizwa ngokuba “liGosa” uChauvin wanyanzela idolo entanyeni kaFloyd. Esinjani isenzo sobuntu.
'Ndiyacela. Idolo lakho elisentanyeni yam. Andikwazi ukuphefumla. '
Indoda emnyama uGeorge Floyd usweleke kungekudala emva kokuba ipolisa laseMinneapolis liguqe emlenzeni (isilumkiso: ukubandezeleka) pic.twitter.com/g13U7U8XJO
- Ngoku (@nowthisnews) Ngamana 27, 2020
Njengombukeli owayelwela ubomi bukaGeorge Floyd ophindaphindiweyo, uDerek Chauvin wayebonakala ukuba 'uyonwabele' intuthumbo awayeyibangela. Kanye njengoko wayexelelwe ukuba uFloyd akashukumi, u-Chauvin wayigcina idolo entanyeni yakhe de yafika i-ambulensi. UGeorge Floyd kumele ukuba usweleke kaninzi.
Le ndoda ayifanelanga kufa esitratweni enjengale ayifakwanga shiti kodwa i-bitch pussy enebheji # Fuck12 #GeorgeFloyd pic.twitter.com/gHxSOXRxcb
-Kingpin Cash (@KingpinCash) Ngamana 27, 2020
Ngaba uGeorge Floyd wayekuchasile ukubanjwa?
Iiyure ezimbalwa emva kokuba i-footage yokuqala ihambile, uninzi lweenyawo lubonwa ngeendlela ezahlukeneyo zolwaphulo-mthetho. Ivenkile ihleli ecaleni kwendawo yolwaphulo-mthetho- kwaye iyindawo yolwaphulo-mthetho nobundlobongela nokubona esikubonayo kwimini ebanzi- yakhupha umfanekiso wayo we-CCTV obonisa iGeorge phambi kwesixuku. Akabonwa ukuba uyaxhathisa ukubanjwa nakuphi na ukubaluleka. Enye i-angle yekhamera ibonisa uGeorge ephethwe ngamanye amagosa amabini. Khawufane ucinge ngehlabathi ngaphandle kweekhamera kunye neeselfowuni. Eli bali liza kwahluka ngoku.
Nini #GeorgeFloyd wasuswa kwimoto yakhe engakhombisi ukumelana nayo. pic.twitter.com/31R5LzRSj7
-UMNWIRED (@MNWIREDD) Ngamana 27, 2020
Uninzi lwemibuzo luhleli lulo lonke olu tyhilelo; ngakumbi, ngaba olu hlobo lonyango lunokunikwa umntu omhlophe ongenabundlobongela? Nditsho nomntu otyholwa ngobundlobongela omhlophe akasoloko ephathwa ngendlela uGeorge Floyd kunye nabanye abarhanelwa base-Melika abaphathwa eMelika.
UGeorge Floyd, umntu
UGeorge Floyd wazalelwa eHouston kwaye wakhula kwiWadi yesiThathu yesixeko. Uphumelele kwiSikolo iJack Yates High apho wayedlala khona ibhola, ngokwe-KTRK. Wafudukela eMinnesota kwiminyaka emine okanye emihlanu eyadlulayo ngomsebenzi kunye nokuqhuba iilori, ngokutsho komhlobo kunye nomdlali wangaphambili weNBA, UStephen Jackson.
Ukwazi umntakwethu kukuthanda umntakwethu, UPhilonise Floyd, umntakwabo George, uxelele I-Lemon ye-CNN ngoLwesibini. "Ungumntu onesidima, akamenzakalisi mntu."
UFloyd wasebenza kwindawo yokutyela, uConga Latin Bistro njengesiqhushumbisi kwaye abaninzi babemazi njengoBig Floyd ngoncumo lwakhe olukhulu kunye nokuma kwelanga.
Bendimazi. Wayengusibhengezo eConga Latin Bistro, apho ibhendi yomfana wam idlala khona. Wayesoloko enoncumo olukhulu ebusweni bakhe namandla amakhulu. Ubekhe wathi kum, "Ndiyathanda indlela oyibeka ngayo intloko yakho ukuba uze apha ngokwakho uzokuxhasa indoda yakho." #GeorgeFloyd pic.twitter.com/MEJuufYI0f
-I-Gina (@ mariemorgan201) Ngamana 27, 2020
Amagosa agxothiwe, Iimpendulo zikaTrump
Inkosi yamapolisa yaseMinneapolis, UMediya Arradondo ngolwesiBini ngolwesiBini nge-26 kaMeyi, babhengeza ukudutyulwa kwamapolisa amane abandakanyeka kulwaphulo mthetho. Umongameli uDonald Trump ibizelwe ubulungisa ngoLwesithathu, ibhengeza kwi-Twitter, "Ndicelile, i-FBI kunye neSebe lezoBulungisa sele bekwenziwe uphando malunga nesisizi esibuhlungu kakhulu sokufa kwabantu eMinnesota yaseGeorge Floyd."
Usisi wexhoba, Bridget Floyd, elila xa wayethetha ne-NBC ifuna ubulungisa kumntakwabo. Ufuna ukuba amagosa angagxothwa nje kuphela kodwa ahlawuliswe nangokubulala.
UFloyd kunye nomlingane, Courteney Ross
Umlingane wakhe, Courteney Ross wathi umntu obhubhileyo 'wayengumntu onesidima' kwabo bamaziyo. URoss uphinde wacela abaqhankqalazi ukuba baxolele ikopi eyabulala uGeorge. “Uyazi, ukuba ubelapha, ibingathi ngumntu wakwaThixo. Uza kuma ngokuqinileyo, ” uthe.
Igqwetha likaTrayvon Martin uBenjamin Crump ligcinwe
Iikhamera zokhuseleko zathunjwa amaxesha ngaphambi kokubulawa kwe #GeorgeFloyd. Ngokucacileyo AKAVUMELEKI ukubanjwa… Ke KUTHENI amagosa amapolisa eMinneapolis esebenzisa amandla agqithisileyo aphumela ekufeni kwakhe?! SIPHENDULA IIMPENDULO. #JusticeForFloyd #SayHisName pic.twitter.com/4yGxvTY2Ln
-Benjamin Crump, Esq. (@AtgqogwaCrump) Ngamana 27, 2020
Amapolisa aseMinneapolis adubule inhlamvu yerabha esixekweni aze awonzakalisa umProtestanti.
Ndibuza kwakhona ukuba babephi ngexesha loqhanqalazo malunga nokuvula uqoqosho lwethu?
Ndikho konke kubantu abaqhankqalaza nokuba andivumi, kutheni le ndlela iphindwe kabini? pic.twitter.com/FrG2k6mcRq
-Fiorella Isabel🌹🔥 (@Fiorella_im) Ngamana 27, 2020
Abaqhankqalazi babuye bahlanganisana ngaphandle kwekhaya lelinye igosa, u-Chauvin, owaguqa entanyeni kaFloyd. Kwiividiyo ekwabelwana ngazo kwi-intanethi, abaqhankqalazi banokubonwa ngaphandle kwekhaya lakhe e-Oakdale ngomhla wesibini ngokulandelana. Kwezinye iifoto, igama elithi ukumbulala lalibhalwe kwindlela awayeqhuba ngayo, eyayibhalwe ngepeyinti ebomvu, efanekisela igazi likaGeorge Floyd.
Njengoko silindele iindaba ezininzi ezenzeka kule meko, ababhikishi kunye nabanomsindo kwijelo leendaba bavuma ukuba olu yayilulwaphulo-mthetho oluthiweyo ngenzondo ngexesha lokubanjwa. Ukanti omnye umntu omnyama wabulawa kuba emnyama eMelika.
UGeorge Floyd Isikhalazo
Izicelo ezininzi ziye zasetwa zokunyanzela abasemagunyeni ukuba bavele ngokukhawuleza kumagosa achaphazelekayo. Esona sikhalazo sikhulu kwi-Change.org sele silungiselele ukuba sisayine isigidi sezigidi ezi-2.4 zenjongo yesigidi esithathu. Ukutyikitya uxwebhu lwezikhalazo, Cofa apha.
Gubungela ubugcisa nguAndres Guzman, Instagram | Andresitoguzman
Okwamva nje, okomzuzu kunye nokuhlaziywa komzuzu ngeli bali libalekayo, cofa apha undwendwela i-CNN
ndimnyama eMelika into yobomi abamnyama george floyd ukubulawa kukageorge ibali le-george floyd thiyile ulwaphulaphulo ukuphathwa gadalala kwamapolisa
NguNwabunie Arah Ngamana 28, 2020